Umtshato wothando kumhlaba wanamhlanje
Ngoku ulwalamano lomtshato lujongene neengxaki - kwakukho ukuphazamiseka, okungaxhaswanga ngumthetho, ufumana inkxaso kwingqalelo yoluntu. Ukwandisa, izibini ezivela kumadoda nabasetyhini bakhetha ukuhlala kunye ngaphandle komtshato.
Ngesinye isikhathi kwimithetho yamaRoma, umtshato wawuphathwa njengento efana nomsebenzi odibeneyo xa indoda kunye nomfazi behlangene. Kwili hlabathi lanamhlanje, le nkcubeko izuzwe njengelifa ekuqondeni okusele "kokulawula uqoqosho oluqhelekileyo", kodwa kwakhona longezelelwa ngeentsingiselo ezongezelelweyo - ukukhuliswa kwabantwana, uxanduva lwabazali kunye noxanduva loxanduva.
Ukususela kwixesha elidlulileyo, akukho mnye umcimbi owawubhiyozelwa ngokukhawuleza kwaye ngokugqithiseleyo, wawungahambisani nenani elikhulu leengoma, imithendeleko kunye neengqungquthela njengeholide yomtshato - umtshato. Abaninzi abasetyhini bakholelwa ukuba umtshato uphambili kwisiganeko esiphezulu ebomini babo.
Umtshato wothando kwihlabathi lanamhlanje uphantsi kwezilingo ezininzi, kuba i-idyll yentsapho ayiyona imana yezulu. Kufuneka izuzwe, kufuneka yenziwe. Kwaye kunzima kunjani ukugcina. Ubomi bentsapho ngumsebenzi xa bobabini nomfazi bebekele iinjongo ezinzima - ukuhlala emtshatweni wothando. Akuyena msebenzi ofanayo kwisitofu okanye kwintsimi enefosholo, kodwa umsebenzi wokuqonda omnye umntu ngaphakathi kwakho-ukwamukela ukungaphumeleli kunye nokunyamezela kwakho. Nguwuphi umsebenzi ongenamsebenzi nomsebenzi wemihla ngemihla yomphefumlo, ukubonakaliswa kweeyure, ukuphendula kunye nokudla.
Umsebenzi ekudalweni komtshato, umtshato othandweni - ungamanga kwaye awunakulinganiseki, akukho kwaye awukwazi ukufumana iziphephelo ezingabonakaliyo. Akubandakanyi ubuvila beengqondo kunye nengqondo, ukukhathazeka, ukunganyamezelani kwizenzo zenye. Kwaye akubandakanyi iintsuku, iholide okanye iieholide.
Ngaba kunzima? Ngokuqinisekileyo. Imitshato yothando kweli hlabathi lanamhlanje lihlala livuza. Uhlobo oluhle, ulwalamano oluhle, olufudumeleyo, xa kungekho mbuzo encinci kunoma ubani ukuba aphinde aphandle udoti, uye kwi-kindergarten yomntwana okanye kwintlanganiso yomzali., Xa uyazi-eceleni kwakho unabantu abalingana, abasondeleyo nabathandekayo. Ngomzuzu onzima, unokuthembela, apho ungakuvula umphefumlo wakho ngaphandle kokwesaba, ukwazi ukuba akuyi kuphuma kwaye ube yipropati yomntu. Kwaye kuphela ngamanyathelo ekhalini kwaye ngokujika ikhilo kwisihluthulelo osiqondayo - kwisimo siphi isimo. Ngaloo ndlela ke kuya kwenzeka ukuba ulondoloze iimvakalelo ezizalwe ngexesha lobudlelwane kunye nokuzifezekisa ekupheleni kweengxaki kunye neengxaki. Kuphela ke kuya kunokwenzeka ukunqoba iingxabano.
Kwaye iingxabano zihlala zihamba nobomi bentsapho, nokuba kukho uthando emtshatweni. Ngenxa yokuba abantu abahlukeneyo babumbene emtshatweni. Ngamanye amaxesha ngemfundo eyahlukeneyo kunye neemfundo ezahlukeneyo zemfundo. Lo mahluko kwaye ulungelelanise ukuvela kweemeko zengquzulwano, nokuba phakathi kwendoda nomfazi onothando. Esinye isizathu sokungquzulana kukubonisa ukuziphatha ngokweqile, ukuziphatha, izinto eziphathekayo, iimfuno zomzimba kumlingane wakhe - "umfazi ococekileyo", "indoda efanelekileyo". Uthando oluselula luhlala luhlala luhlala, ngamaxesha onke nangenxa yezizwe zonke, lenze i-eral. Kwaye kwimihla yomtshato, ngamanye amaxesha yadibana njengendoda eyadalwa ngezandla.
Ihlabathi lanamhlanje ligqugquzela wonke umntu kunye nomyeni nomfazi ukuba baphendule njengesikwelekazi esesigodini. Kwabaninzi, isikhubekiso singumsebenzi ogqithiseleyo, ukungabikho kwekhaya kunye nokuhamba kwezoshishino ezingapheliyo. Ngeemeko ezinjalo kukho ukulahlekelwa ngumntu othandekayo, onokuthi akhule abe ngongxaki. Bonke bahlala ngoku ngokuxhatshazwa, benengqondo yokuphelelwa amandla, ecaleni lokuphazamiseka kwemihlaba. Kule meko, nayiphi na into encinane ingaba ngumzila wokugqibela kulwalamano kwaye uphuphe umtshato ngaphakathi. Ngako oko, lonke ixesha ukuba uqaphele xa kuyimfuneko ukuyeka, jonga ngeenxa zonke kwaye uqaphele ngokugqibeleleyo: into ephambili kule ubomi ngokukhawuleza ayikho ixabiso eliza kwaye lihambe. Into ephambili ekhaya kunye nosapho.
Ngendlela efanelekileyo ukuziphatha ngayo nomfana emva kokuqala kokubanga?
Ulwalamano olufanelekileyo kwintsapho. Indlela yokuziphatha
Ngaba kunokwenzeka ukuba uthandane nomnxibelelwano osisiseko?
Ndingabuyisela njani intombazana enomntwana?
Indlela yokuziphatha ngayo ubudlelwane? Iintsilelo ezintlanu zaBasetyhini
Indlela yokuvuselela iimvakalelo
Uthando olunoburhado kunye nesithandane sokugweba
Inkosikazi ingasinda njani kwindoda yokuziyeka?
Yintoni oyifunayo ukwazi ngokukhuluphala?
Indlela yokwenza ijacket lesikhumba
Indlela yokululela ikati endlwini
I-vitamin isaladi eneklabishi ebomvu, iidiliya
Imbali yendleko, ingubo yomtshato eRashiya
Olubomvu kunye omnyama: iqoqo le-makeup i-Dolce ne-Gabbana Night Baroque Out
Imveliso yobisi yobusiya kunye namafayili okutya
Igumbi lokulala kwigumbi lelizwe
Ubuthathaka bomfazi oqinileyo
Ikhuki kunye namantonga kunye neeraschino cherries
Ingxabano njengesiganeko sesini
I-cottage cheese casserole nge-blueberries